Thuja | November 2019
Panasonic's beerkiisii ​​ugu horreeyey ee la daboolay wuxuu ku kici karaa in ka badan 80 tan oo cagaar ah sannadkiiba
Ugu Weyn Ee Thuja
Sida loo doorto dhirta loogu talagalay dabbaradaha, naqshadeynta iyo xalalka la taaban karo
Runtii mulkiilayaasha riyooyin qurux badan oo ku wareegsan guriga ama goobta. Laakiin qof kastaa ma awoodo in uu dhiso xayndaab ama dhagax dhagax. Sidaa darteed, dadku waxay raadinayaan miisaaniyad kale, miisaaniyad dheeraad ah isla markaasna xalal qurux badan. Mid ka mid ah xalku waa dhismaha duufaan. Dhirta iyo geedo yaryar ma aha oo kaliya xafiisyo iyo midabyo fara badan, laakiin sidoo kale keenaan faa'iidooyin kale oo waxtar leh - waxay ciyaaraan doorka xayndaabka.
Maxay yihiin sifooyinka bogsashada ee thuja, sidee geedka u saameeyaa jidhka bini'aadamka?
Thuja waa xayiraad ballaadhan oo ka mid ah qoysaska qashinka ah. Waxaa loo isticmaalo by bannaanka ujeedooyin qurxinta. Si kastaba ha ahaatee, geedka waxaa la og yahay ma aha oo keliya muuqaalkiisa heesthetic, laakiin sidoo kale for heesaha bogsiinaya. Ma taqaanaa? The founder of genetics S. Kh. Hahnemann, isagoo daraasad ku lahaa faa'iidada thuja, sannadkii 1918 waxa uu ku soo rogay qayb ka mid ah daroogooyinka ugu horreeya.
Thuja galbeed "Brabant": soo deg, ka bax, isticmaal jimce
Thuja galbeed "Brabant" waa mid ka mid ah noocyada galbeedka tiuja, kaas oo lagu kala soocayo koritaankiisa degdegga ah, dhererkiisu wuxuu gaadhaa 20 m, iyo dhexdhexaadinta taajka waa 4 m. baxo jiilaalka. Tujbada thuja waa mid is dulfuulan, jilicsan, waxay ku dul degi kartaa dhulka, caleemuhuna waxay leedahay hooska casaan-madow, badanaaba waa cufan.
Talooyin loogu talogalay inuu bannaanka u: sida loo doorto meel loogu talagalay dhir soo koraya, waxa la abuurayo soo socda iyo talooyinka kale
Noocyada daryeelka iyo dhalida ee gloxinia guriga
Sida loo takhaluso slugs on kaabajka, basbaas iyo khudaarta kale, iyo sidoo kale berry ah?
Talooyinka ugu wanaagsan ee daryeesha sanadka
Cinjir caleen ah oo lagu kalsoonaan karo "Kishmish Nakhodka"
Iftiiminta dheeraad ah ee geedo waa mudnaan leh kuwa bilowga ah iyo bannaanka u khibrad leh. Iftiin waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee kobaca firfircoon iyo horumarinta caafimaadka leh ee dhirta kobcaya. Bixinta iftiiminta geedo, waa in la helaa fikrad ah nooca nalalka iftiinka loo baahan yahay iyo sida ugu dhow ee suurtogalka ah si iftiinka qoraxda. Read More
Waa maxay currant madow faa'iido: bogsiinaya guryaha iyo contraindications
Sida loo diyaariyo kabaha (aronium) madow-fruited jiilaalka
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Thuja 2019